Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » In badan oo ah Pegasus UK duulimaadyada Turkiga hadda iyadoo Turkigu dib u furayo
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Turkiga • Wararka UK
Pegasus waxay dib u soo celisay duulimaadyadii tooska ahaa ee Istanbul Sabiha Gökçen Airport oo ka timid London Stansted, iyadoo duulimaadyo laba jeer ah maalin walba ay ka duuli jireen London Stansted Airport 14:40 iyo 00:05, waxayna ka soo laabatay Istanbul Sabiha Gökçen Airport 11:35 iyo 21:00.
Markay Turkiga dib u furmayso, Pegasus Airlines waxay duulimaadyo badan ka bixisaa London Stansted iyo Manchester.
Pegasus waxay u duushaa meelaha qoraxda laga helo oo ay ka mid yihiin Antalya, Bodrum, Dalaman, Izmir, Istanbul iyo kuwo kale oo badan oo ka tirsan Turkiga iyo meelo ka baxsan.
Marka la eego ku dhawaaqista cusub ee dib ugu celineysa Turkiga liiska liinta, Pegasus waxay u aragtaa koboc xoog leh boosaskii ay Turkiga ka siiyeen Ingiriiska.
Marka xagaagu noqdo dayrta, u duuli qorraxda dahabka ah, xeebaha bacaadka ah iyo daawashada dad-la'aanta. Ka dib markii lagu dhawaaqay in Turkigu u soo gudbay liiska amber-ka Ingiriiska 22-kii Sebtember 2021, oo hogaaminaya markab qiimo jaban, Pegasus Airlines, waxay ballaarisay jadwalka iyo tirada duullimaadyada tooska ah ee London Stansted iyo Manchester ee Turkiga iyo wixii ka dambeeya.
Pegasus ayaa dib u soo celisay duulimaadyadii tooska ahaa ee garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen ee Istanbul London Stansted, iyada oo duullimaadyo laba-maalinle ah ay ka duulayaan 14:40 iyo 00:05 garoonka London Stansted Airport, kana soo noqonayaan Istanbul Sabiha Gökçen Airport markay tahay 11:35 iyo 21:00. Duulimaadyada hadda waa la iibiyaa laga bilaabo £ 49.99 hal dhinac ah. Duulimaadyo toos ah oo shan jeer ah oo toddobaadle ah ayaa hadda sidoo kale ka shaqeeya Madaarka Manchester kuna sii jeeda Istanbul Sabiha Gökçen Airport, iyagoo ka ambabaxaya 12:50, iyadoo duulimaadyada soo laabanaya ay ka dhoofaan Istanbul Sabiha Gökçen Airport saacaddu markay tahay 09:45 (waqtiyada maxalliga ah ayaa khuseeya). Qiimaha hal mar laga raaco Manchester ayaa la iibinayaa hadda £ 74.99. Labaduba waxay bixiyaan isku xirnaan aad u wanaagsan oo ku baahsan shabakadda Pegasus ee 36 goobood oo ku yaal Turkiga, oo ay ku jiraan xeebaha caanka ah ee xeebaha leh oo leh dhaqanka iyo nasashada, sida Bodrum, Dalaman iyo Antalya - iyo sidoo kale 83 meelood oo kale oo caalami ah.
lagu magacaabo Airlines'jadwalka la ballaariyey waxaa ka mid ah shan jeer duulimaad toos ah oo toddobaadle ah oo ka bilaaban doona 21ka Oktoobar London Stansted iyo Izmir, oo ku taal xeebta Aegean ee Turkiga, iyadoo duullimaadyadu ay ka duulayaan London Stansted 12:55, iyo soo noqoshada duullimaadyada ka tagaya Izmir Adnan Menderes Airport 10:05 (waqtiyada maxalliga ah) codso). Duulimaadyada tooska ah ee Izmir hadda waa la iibiyaa laga bilaabo £ 59.99. Pegasus ayaa sidoo kale bilaabi doonta duulimaadyo toos ah oo u dhexeeya London Stansted iyo Antalya xilliga jiilaalka 20ka Oktoobar.
lagu magacaabo Airlines CCO, Güliz Özturk ayaa yiri: “Iyadoo la tixraacayo ku dhawaaqista cusub ee dib ugu celineysa Turkiga liiskii amber, waxaan aragnaa koboc xooggan oo ku saabsan boosaska aan u dirnay Turkiga ee ka imanaya England, iyadoo laga jawaabayo dalabkaan sii kordhaya iyo rabitaanka socdaalka dayrta, waxaan Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan ballaarinno barnaamijkeena duulimaadka London Stansted iyo Manchester ilaa Turkiga, oo leh xiriir aad u wanaagsan dhammaan shabakadeena 119 meelood oo ku kala yaal 44 dal - taasoo la micno ah in dadka safarka ah ay yeelan doonaan xulasho badan oo dheeraad ah oo leh ikhtiyaarrada ballansashada dabacsan dayrta iyo jiilaalka. Waxaan qorsheyneynaa inaan sii kordhino tirada duullimaadyadayada ka imanaya England dabayaaqada dayrta haddii dalabku sii kordho, aad baanna u sugaynaa inaan ku soo dhaweyno martidayada marka ay dib u bilowdaan safarku mar kale.
Sidoo kale shabakad ballaaran oo ka jirta Turkiga, Pegasus Airlines waxay sidoo kale u duushaa 119 goobood oo ku yaal 44 dal, oo ay ku jiraan meelaha sida Dubai, Tel Aviv iyo Sharm el-Sheikh, oo bixisa duulimaadyo toos ah oo jaban iyo isku xirnaan aan kala go 'lahayn mid ka mid ah maraakiibta ugu da'da yar Yurub .
Muhiimada ugu sareysa ee Pegasus waa caafimaadka iyo badbaadada, iyada oo ay jiraan tallaabooyin badbaado oo dhammaystiran oo loo yaqaan 'Covid-19' oo ay ku jiraan maaskaro loo baahan yahay markabka. Pegasus sidoo kale waxay ahayd mid ka mid ah diyaaradihii ugu horreeyay ee jaban ee adduunka ee tijaabiyay IATA app-ka socdaalka ee la xiriira caafimaadka waxayna diyaaraddu siisaa hoy aan xiriir lahayn iyo boorsada oo ay la socoto Express Kiosks ee Turkiga.